Dowladda Somaliya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Dowladda Somaliya oo sheegtay inay dishay xubno ka tirsanaa Al-Shabaab
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in xubno ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab lagu dilay howlgal laga fuliyay deegaanno ka tirsan gobolkaasi, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Taliyaha ururka 143 ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay in howlgal lagu soo qabtay qaraxyo sidoo kale ay soo saareen qaraxyo ay Al-Shabaab ku aaseen Tuulooyin hoostaga deegaanka Bariire ee gobolka shabellada hoose.
Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay, in lagu khaarijiyay 13 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, intii ciidamada ay ku guda jireen soo saarista qaraxyada Al-Shabaab ay aaseen.
Ma uusan sheegin taliyaha Khasaaraha Ciidamada Xoogga dalka ka soo gaaray hawlgalkaasi, balse waxa uu xusay kaliya in Al-Shabaab ay waxyeelo gaarsiiyeen.
Muddooyinkii dambe, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo miino baaris ah waxa ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo la dilay